गुरु घिमिरेको पराजय डा. शेखरका लागि चुनौती – Dcnepal
प्रकाशित : २०७८ मंसिर २० गते १३:३९
काठमाडौं। मोरङका कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरेको पराजय यतिबेला सबैभन्दा चर्चा र चासोको विषय बनेको छ। कांग्रेस प्रदेश अधिवेशनमा प्रदेश एकको सभापतिका उम्मेद्वार बनेका घिमिरे झापाका उद्धव थापासँग २ मतको झिनो मतान्तरले पराजित भए।
कोइरालाको गढ भनेर चिनिएको मोरङ र कोइरालाहरुकै समर्थनमा उम्मेदार बनेका घिमिरेको पराजयको खबर कांग्रेसभित्रका इमान्दार कार्यकर्ता र गैरकांग्रेसीका लागि पनि अप्रत्यासित बन्न पुग्यो। विद्यार्थी राजनीतिबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदायका घिमिरे कांग्रेसको बौद्धिक र अध्ययनशील नेताको रुपमा परिचित छन्।
झापा जिल्लाका पूर्वसभापति र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला ‘गुट’का नेताको रुपमा मात्र परिचित थापाको राजनीति यात्राले यति लामो राजनीतिक फड्को मार्ने आंकलन उनकै लागि पनि असाधारण विषय थियो।
केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका गुरुको उम्मेदारी आफैंमा ‘ह्याभ्भिवेट’ उम्मेद्वारी थियो। तर निर्वाचनको परिणाम गुरुको पोल्टामा परेन। केन्द्रीय सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तेस्रो धार भनेर चिनिएका सिटौला समूहका महाधिवेशन प्रतिनिधिले गुटको संरक्षण गर्न चुकेनन् र थापाको जित सुनिश्चित गराए।
डा.शेखर कोइराला उम्मेद्वार चयन गर्नेदेखि दिएर आफ्नो टिमबाट उम्मेदार बनेका घिमिरेलाई जिताउन केही सातादेखि बिराटनगरमै अहोरात्र खटिरहेका थिए। र आफ्नो प्रदेशमा बलियो प्रभावको सन्देश देखाउँदै केन्द्रीय सभापतिको उम्मेदार दिने डा.कोइरालाको रणनीतिले पनि फेल खाएको छ। र उनीमाथी नै नयाँ प्रश्न बनेको छ, प्रदेशमा प्रभाव देखाउन नसक्नेले केन्द्र कसरी जित्ने?
घिमिरेकाे हारमा आफ्नो/आफ्नो खाले विश्लेषण भइरहेको छ। तर कोइराला समूहका नेताहरु कतिपय नेताहरुनै टिमबाट असहयोग र देउवा समूहको शक्तिको आडमा उनलाई पराजित गरेको भन्नेहरु पनि छन्। कोइराला समूहबाट नै प्रदेश सभापतिको आकांक्षी रहेका सुनसरीका राजीव कोइरालाको समूहबाट पनि मत विभाजन भयो भन्नेपनि बिराटनगर कांग्रेस बृतमा चर्चा नभएको हैन।
केन्द्रीय सभापतिका आकांक्षी डा.शेखर कोइराला उम्मेद्वार चयन गर्नेदेखि दिएर आफ्नो टिमबाट उम्मेदार बनेका घिमिरेलाई जिताउन केही सातादेखि बिराटनगरमै अहोरात्र खटिरहेका थिए। र आफ्नो प्रदेशमा बलियो प्रभावको सन्देश देखाउँदै केन्द्रीय सभापतिको उम्मेदार दिने डा.कोइरालाको रणनीतिले पनि फेल खाएको छ। र उनीमाथी नै नयाँ प्रश्न बनेको छ, प्रदेशमा प्रभाव देखाउन नसक्नेले केन्द्र कसरी जित्ने?
गुरु घिमिरेलाई मतदान गरेका एक महाधिवेशनले त डा.शेखरले नै घिमिरेलाई पराजय गरे भन्ने समेत आरोप लगाए। ‘केन्द्रमा सिटौलासँगको समिकरणलाई यथावत राख्न प्रदेशमा उनी निकटका उम्मेद्वारीलाई विजयी बनाएर गुरु दाइको उम्मेद्वार माथि सौदाबाजी गरेको कुराहरुपनि छ,’ उनले भने।
नेता भन्न साथ चिल्ला र महँगो गाडीमा हुँइ किने मान्यता हाम्रो समाजको बुझाइ छ। तर घिमिरेको साधरण जीवन शैली कांग्रेसलाई नजिकबाट बुझ्ने सबैले देखेका छन्। घिमिरेले कतिपय सार्वजानिक कार्यक्रममा समेत सार्वजानिक यातायात प्रयोग गरेको धेरै पटक देखिएको छ।
त्यसैलेपनि ती साधरण जीवनशैली र असाधरण बौद्धिक चेत भएका नेताको हारमा सहानुभूति बढेको हुनसक्छ। मोरङका एकका महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचनमा हार, जित भन्ने कुरा स्वभाविक प्रक्रिया भएपनि घिमिरेको पराजय अस्वभाविक ठान्छन्।
‘हामी लोकतान्त्रिक पार्टी हौँ। निर्वाचन र त्यसको परिणामलाई सामान्य रुपमा लिन्छौँ। तर प्रदेश एकमा सत्ता र पैसाको धेरै चलखेल भएको छ। र त्यहाँ गुरु दाइलाई हराउनैका लागि र उद्धव दाइलाई जिताउनकै लागि भोट समेत किनबेच भएको छ,’ ती प्रतिनिधिले भने।
उनले निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार शनिबार बिहान निर्वाचन हुनुपर्ने भएपनि दिउँसो ३ बजेबाट सुरु गरेर राति १० बजेसम्म मतदातालाई मंसिरको चिसोमा उभ्याउने व्यवस्थापन र निर्वाचन समितिको निश्पक्षता मै प्रश्न उठाएका छन्।
उनका अनुसार ‘तय भएको समयभन्दा धेरै ढिलो निर्वाचन गराउनु र निर्वाचन पश्चात पनि धेरै ढिलो मत गणना हुनुले प्रशस्तै शंकाहरु उत्पन्न भएको छ।’ नेपाल विद्यार्थी संघका नेता आयुश खतिवडा पनि घिमिरेको पराजयले अबको कांग्रेस कुन बाटो जाँदै छ? भन्ने संकेत गरेको बताउँछन्।
‘आफ्नो नेता चयन गर्ने अधिकार कांग्रेसमा रहेको छ। यो अधिकार नै कांग्रेसको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष पनि हो।तर हामी कुन तहको राजनीति गर्दै छौँ भन्ने मुल प्रश्न बनेको छ।’ खतिवडाले भने, ‘झापाको पूर्व सभापति र कांग्रेसको निवर्तमान केन्द्रीय सदस्यको राजनीति उचाई समान हुँदैन। लोकतन्त्र भनेको निर्वाचन हुनुमात्र हैन। निर्वाचनमार्फत हामीले कस्तो नेता चयन गर्यौँ? त्यसले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ। तर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले नेताभन्दा पनि गुट हेर्नुभयो। यो कांग्रेस र नयाँ पूस्ताको चुनौती हो।’
इलामका एक महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि घिमिरेको यो हारलाई इतिहासले समिक्षा गर्ने बताउँछन्। ‘नेपाल विद्यार्थी संघको नेतृत्व गर्दै पार्टीको मुलधारमा रहेको गुरु दाइको उम्मेदार प्रदेश एकको कांग्रेसको लागि आफैंमा गौरवको विषय थियो। तर हामीले गुटको नेतालाई चयन गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘गुरुदाइको पराजय भनेको कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरणको बहस चलाउने सबै नेताको लागि चुनौती हो।’
घिमिरेको हारमा कांग्रेस डा.नेता चन्द्र भण्डारीपनि दुख पोख्छन्। उनी भन्छन्, ‘परिवर्तका संदेश वाहक गुरु घिमिरे र अष्टभुजा पाठकको मत परिणाम बाट रुपान्तरणकारिणीहरु माथि चुनौती थपिएको छ। नेपाल जस्तो देशमा राजनीति विचार र इमान्दारिताबाट मात्र चल्दैन।’